Ny Sneaky Cpa lantonoara 2.0 : Ahoana no hamorona ny First lantonoara - Lantonoara Of The Day
Ny Sneaky Cpa lantonoara 2.0 : Ahoana no hamorona ny First lantonoara
Ahoana no mamorona Cpa lantonoara hatrany fa miteraka Sales
Hi Francis eto misaotra anareo indray loatra ho an'ny ny hevitra. Ary araka ny nampanantenainy eto no tsikelikely mpitari-dalana hanorina ny voalohany Sneaky Cpa lantonoara.
Foana eto mba hihaino anao sy hanome lanja. Noho izany aza manahy aho dia afaka hifandray amin'ny fotoana rehetra amin'ny [email protected]
Reminding : Mila fitaovana manaraka ireto mba hamorona ny lantonoara
toerana (sehatra anarana) sy / na ny clickfunnel
3 ny 4 cpa tolotra
The Top 7 Dingana hanorina ny First lantonoara
Ireto no dingana manaraka mba hanao izany ny tenanao
Hahazo sehatra amin'ny namecheap
Connect sehatra ny fampiantranoana kaonty
Hanao ny lantonoara
Connect sehatra ny Clickmagic
Connect Rotator sy ny lantonoara
Add tolotra ho any Clickmagic
Fampielezan-kevitra manomboka ny fifamoivoizana
nividy aho 2 sehatra (ny iray ho tena toerana ary ny iray hafa ho toy ny rotator clickmagic sehatra). Fotsiny izy ireo vidin'izany $5.76 satria aho handeha for Life changer ebooks
Connect Domains To ny Hosting Account
Aho mampiasa hostnine hampiantrano ny sehatra. Izany no mahatonga ahy tsy maintsy manova anarana sehatra lohamilina eto.
Contact ny fampiantranoana orinasa, raha tsy fantatrao ny fomba hanaovana izany na mangataka fotsiny ny DNS. Hanampy ny milaza ny sehatra ny ny lohamilina.
Ary avy eo vao ny Cpanel hanampy ny sehatra ihany koa.
Hahazo zavatra toy izany raha nanao izany araka ny tokony ho
Arahabaina. Ankehitriny dia mila ny fametrahana WordPress amin'izany sehatra vaovao. Aza manahy, very easy or you can go to Youtube and search for « how to install wordpress »
Raha vao vita eto no vokany.
Rehefa afaka izany, tsy maintsy hametraka Instabuilder raha tsy handeha hiaraka clickfunnels. Araho dingana eto ambany ny hametraka izany plugin (Tsy maimaim-poana)
Avy eo tsy maintsy hampavitrika azy io ary ampidiro eto ny fahazoan-dalana toy ny nataoko.
Tsara izany. Ary mampiasa Instabuilder na CLickfunnel mba hamorona marina 4 pages like the ones below :
Aho tsy handeha hampiseho aminao ny fomba mba hanorina azy ireo, satria afaka mampiasa ny tutorial hanao izany. Tsy azo adika Ary tena teny amin'ny alalan'ny teny izay nataoko.
Connect Domain To ny Clickmagic Account
Fanteno ny sehatra faharoa dia nividy. Izay no iray isika dia ampiasaina amin'ny Clickmagic.
Add www.clkmr.com. Wher you have the red bar. Soloy ny teo aloha tao amin'ny tahirin-kevitra izay nomeko anareo fotsiny aho. And you go to your Clickmagic account :
Tsindrio Tools / Domain Manager ary hametraka ny sehatra faharoa no tahaka nataoko. Jereo ny sary etsy ambony.
Then you have to create your rotator : tsindrio Rotators / Mamorona New Rotator avy eo mameno endrika endrika toy ny nataoko.
Afaka mampiasa ny Help foana fizarana, raha tsy fantatrao ny fomba hanaovana izany marina. 🙂
Tsara izany Buddy.
Connect Rotator Ary ny lantonoara
Tena mirehareha ny aminao, satria ianao nanao izany. Tsy amin'ny alalan'ny famakiana 'ity faritry fa ny manao zavatra mandra eto. Ianao Mendrika fahombiazana ary ianao tsy lavitra.
Ankehitriny handika ny rohy rotator vao namorona azy io, ka mandehana apetaho amin'ny lantonoara
Mametaka ny rohy eo ambany ny bokotra zavatra pejy
Add offfers ho any Clickmagic
Rehetra tsy maintsy atao izao dia ny ampidiro ny Cpa dia manolotra amin'ny Clickmagic rotator ka tsy manana ny hikasika zavatra ao amin'ny lantonoara.
Raha maty ny tolotra, ianao hanoloana azy fotsiny mivantana amin'ny clickmagic tsy lantonoara.
Ireto Cpa manome nofidiko avy Maxbounty tambajotra.
Ary farany ianao dingana manaraka dia ny fiara goavana fifamoivoizana ny lantonoara, tony ka jereo vola horonan-taratasy ao amin'ny kaonty.
Noho izany ... indray , raha nahatsiaro very, fotsiny antsoy aho. Tonga eto aho mba hanampy.
Aza adino ny maka anao dfy lantonoara.
Mamorona kaonty eto raha tsy manana ny iray
Lazao ahy raha misy fanontaniana.
Ny lantonoara ny andro Team